नेपालमा आज हालसम्मकै बढी संक्रमित फेला, कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्
October 10, 2020 784
शनिबार काठमाडौं उपत्यका’सहित देशका विभिन्न जिल्लामा गरी ५ हजार ८ जनामा कोरोनाभाइरस सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमि’तमध्ये उपत्यकामा मात्रै आधाभन्दा बढी रहेका छन् । बितेको २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ६७२ जना कोरोना’भाइरस सं’क्रमित थपि:एका छन् ।
काठमाडौंमा २ हजार १००, भक्तपुरमा २०३ र ललितपुरमा ३६९ गरी २ हजार ६७२ जनामा संक्र’मण पुष्टि भएको हो । यस्तै मोरङमा ३९४, चितवन १४७, रुपन्देहीमा २१५, सुर्खेतमा १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल मनाङ र मुस्ता’ङबाहेक देशभर’का अरु सबै जिल्ला’मा सक्रिय सं’क्रमित रहेका छन् ।
हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० हजार ८१८ रहेको छ भने होम आइसोले’सनमा १७ हजार १६४ र संस्था’गत आइसोलेसनमा १३हजार ६५४ जना रहेका छन् ।
यस्तै नेपालमा कोरो’नाबाट थप १४ जनाको मृ’त्यु भएको छ। यससँगै मृतकको कुल संख्या ६१४ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसं’ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जा’गेश्वर गौतमले शनि’बारको नियमित प्रेस ब्रिफि’ङमा जानकारी दिए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १९ हजार ३२० जनाको पीसीआर प’रीक्षण भएको छ । यस्तै कुल संक्रमित मध्ये ७४ हजार २५२ जना निको भएका छन् । मन्त्रा’लयका अनु’सार पछिल्लो २४ घण्टा’मा निको हुनेको संख्या १,२२९ रहेको छ । – रातोपाटी
Prevछोरी पाउने आशामा १३ जना छोरा जन्माएका दम्पत्ती भन्छन्, ‘छोरी नजन्मेसम्म हामी रोकिँदैनौं’
Nextकोरोनाले नेपालमा आज थप १४ को मृ त्यु, यी जिल्लाका हुन् मृत’क..
भिडियोमा देखिए बाहेक रबिले के कुरा गरेका थिए मन्त्रीसँग ? दीपक बोहोराले खुलाए भित्री कुरा